Fianakaviana handeha hamoha fasana tamin’io andro io, nikasa hanatanteraka famadihan-drazana no nahita ny zava-nitranga ka ankona tanteraka. Razana lena iray vao nalevina fotoana vitsy sy karandoha sisa no hitan’izy ireo tao am-pasana fa lasan’ireo tsy mataho-tody avokoa ny ambiny. Niparitaka tao am-pasana ny lamban-drazana ary mbola narahan’ireo jiolahy hafatra fa « Asakasak’izay tsy hanao fa 70.000 Ar ny kilao ». Fasana somary mitokana ao an-tendrombohitr’Ankarana ity lasibatra ity. Efa nampandre ny mpitandro ny filaminana ireo tompom-pasana raha ny fantatra hatrany.